အင်တာနက်ဇာတ်လမ်း (၉) (ဇာတ်သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အင်တာနက်ဇာတ်လမ်း (၉) (ဇာတ်သိမ်း)
အင်တာနက်ဇာတ်လမ်း (၉) (ဇာတ်သိမ်း)
Posted by htet way on May 19, 2012 in Short Story | 12 comments
ကိုယ့်ဆရာရေ ကျွန်တော်က သူရစိုးပြတဲ့ စာရွက်လေလးကို ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကိုမင်းနဲ့ သူ့ချစ်သူ ရတနာ ခင်တို့ ပြောနေတဲ့ ဂျီတော့ ကစကားတွေပါ။
ုko min ခင်ရယ် အကို က ပြန်သာပြန်ခဲ့ရတာပါ စိတ်က ခင့်ဆီမှာ
chocho1500 ခင်လည်း ကို့လိုပါပဲ
ုko min ကို … ခင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါ လက်ထပ်ဖို့ ထိရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ
chocho1500 ကို့ … စိတ်မကောင်းတော့ မဖြစ်နဲ့နော် ခင့်ကို အမေက လက်ထပ်ပေးဖို့ လုပ်နေတယ်။ အမေက သူစီစဉ်တာလက်ခံရမယ်တဲ့ တကယ်လို့ ငြင်းရင် သေခန်းပြတ်တဲ့ ခင်က
မိဘကို စိတ်မဆင်းရဲစေချင်ဘူး ကို့ ကိုလည်း အားနာပါတယ်။ တနေ့က ကိုယ်လာတာ အိမ်က သိသွားတယ် ဒါကြောင့် အိမ်ထဲက အပြင် မထွက်ခိုင်းတော့ ဘူး သူတို့ စီစဉ်တဲ့
သဘောင်္သား စည်သူကျော်ဆွေနဲ့ ပဲ လက်ထပ်စေချင်တယ်…တဲ့
ko min ခင်ရယ် … ဘယ်လို ပဲ ရှိနေပါစေ ကို လာခိုးမယ် ခင်သာ လိုက်ခဲ့ ရင် ကိုယ်သိပ်ပျော်မှာပါ။ ခင် ကို့ ကို လက်ထပ်ပါနော်
chocho1500 မဖြစ်နိုင်ဘူးကို အိမ်က အင်တာနက်တောင် သုံးခွင့်မပေးတော့ ဘူး ဒါ နောက်ဆုံးပဲနော်ဆိုပြီး အခု ခွင့်ပြုလိုက်တာ ပါ နောက်လည်း ……
ko min အော် ခင်ရယ် ကို့ အဖြစ်က ဆိုးလိုက်တာ
ကိုယ့်ဆရာရေ ဒီလို စကားလေးတွေနဲ့ ကောင်မလေးက ဖြတ်လိုက်တာ ပါးပါလေး တကယ်ပါးနပ်တာပါ ။ကျွန်တော်က ကိုမင်း အလိမ်ခံရမယ်ဆိုတာ အစကတည်းကကြိုသိနေတယ်လေ။ ကိုမင်းနဲ့ သနားဖို့ကောင်းတာက သီရိဆိုတဲ့ အပျိုကြီးပဲ ။ သူက ဂျီတော့မှာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် သွားလုပ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့ ခင်ကြတယ် နောက်တော့ မ .. မချစ်ရင် ဘ၀ပျက်သွားနိုင်တယ် ဘယ်လောက်ဝေးဝေးမရယ်…တို့ ဘာညာ နဲ့ကြွေလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ရက်လေး စကား မပြောရရင်တောင် လွမ်းစိတ်မပြေ ဖြစ်ပါလေရော ။ကောင်လေးက မလေးမှာနေတာပါ နယ်မြို့က သီ၇ိနဲ့ ဆက်ပြီး
ဘောလုံးပွဲတွေလောင်းခိုင်းတယ်။ ရှုံးတော့ ဟိုက ပိုက်ဆံပို့ပေးပါတယ်။နောက်တော့ မ ..စိုက်ပေးထားလိုက် ပေါ့။ သီရိကလည်း စိုက်ပေးပါတယ် ငါးသိန်းလောက်စိုက်ရတဲ့ အခါလည်းရှိတယ် နိုင်ရင် တော့ ပုသိမ်က
သူ့မိဘ အိမ်ကို ပို့ပေးရတယ်။ တခါက သိန်း သုံးဆယ်တောင်နိုင်တာ ကိုယ့်ဆရာရေ ကောင်လေးကို သီရိက ၀မ်းသာအားရ ဖုန်းဆက်တော့ မရယ် အိမ်ကို ပေးလိုက်ပါ အကုန်ပေးလိုက်ပါနော် သူတို့ ပိုက်ဆံ အရေးတကြီးလိုနေလို့ မကို ပေးစရာကို နောက်အပတ်မှာ မောင်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်…ဒီလို ကိုယ့်ဆရာရေ။ နောက်တော့ ဘောပွဲက သိန်း ငါးဆယ်လောက်ရှုံးပါလေရော ဒီတော့ မလည်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ
ဖြစ်ရော ကောင်လေး ဆီ ဖုန်းခေါ်တာပေါ့ ကိုယ့်ဆရာရယ် ဖုန်း က ဆက်သွယ်လို့မရ ၊ ချစ်စကားလှလှလေးတွေ သီကြူးနေကြ ဂျီတော့ ကလည်း အကောင့်ကို ဘလော့ လုပ်ထား။ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်ရတာပေါ့
မ..မချစ်ရင် ဘ၀ပျက်သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မောင် ရဲ့ ရိုက်ချက်က မ ဘ၀ပျက်လုလုပဲ ကိုယ့်ဆရာရေ ဒီတော့ ကောင်လေး မိဘတွေ အိမ်ကို မျက်နှာ ငယ်လေးနဲ့ သွားတော့ ခြံဝမှာ မနည်းစောင့်ရတယ်
ကောင်လေး အဖေနဲ့ လည်းတွေ့ရော အရင် ပိုက်ဆံလက်ခံတုန်းက ရုပ်မဟုတ်တော့ ဘူး တင်းတင်းမာမာပဲ “ အေးကွာ ..သားက ဆိုးလွန်းတော့ ဒို့တွေလည်း လက်လျှော့ထားတာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ
သူလုပ်သမျှ အိမ်က လိုက်မရှင်းနိုင်ဘူး သူနဲ့ သာ ရှင်းကြပါ ” ….တဲ့။ ကဲ ကောင်းရောကိုယ့်ဆရာရေ သီရိလည်း အိမ်ကိုဂရံ ပေါင်ပြီး ဆပ်လိုက်ရရှာတယ် ကိုယ့်ဆရာရေ။
ကျွန်တော်လည်း မီဒီယာ ခင်မောင် အကြောင်းမေးမိတယ် ။ခင်မောင် ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတာကိုး။ ခင်မောင်ကိစ္စ ဘာကြားလည်း ဆိုတော့ သူရစိုးက
ခင်မောင်က သူ့ကောင်မလေး က သိပ်တွေ့ချင်တယ် အတူနေချင်တယ် ဆိုပြီး ပူဆာတယ်တဲ့ ဆရာ ဒါနဲ့ ခင်မောင်က ကောင်မလေး မြန်မာပြည်ကို လာချင်တယ် ဆိုလို့ ငွေပို့ပေးလိုက်တယ်
တလောက မြေကွက် ရောင်းရငွေ ထဲက သူအမေ မသိအောင် ရန်ကုန်သွားပြီငွေ ပို့လိုက်တယ် နောက် ရန်ကုန်မှာ စောင့်ရတာပေါ့ဆရာ။
သူရစိုးကပြောလက်စ စကားကို ခေတ္တ ဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်ကို ကြည့်ပါတယ်။
ခင်မောင်တည်းခို ခန်းမှာ တည်းပြီး တော့ စောင့်တာတဲ့ ဟိုက ငွေ ရပြီး နှစ်ရက် အတွင်း လာမယ်ဆိုတာကိုး ကျွန်တော်က မလာမယ်မှန်း သိလျှက် နဲ့ “လာရဲ့လားကွ ” လို့ မေးလိုက်တော့
သူရစိုးက “ ဘယ်လာလိမ့်မလဲဆရာရယ် နောက်တော့ ကောင်မလေး ပေးထားတဲ့ ဖုန်းကို ဆက်တော့ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လိုပြော ခင်မောင်က လည်း ဖရီဒါ ကိုပဲမေး
သူပြောတာ ခင်မောင် အကုန်မသိ ခင်မောင်ပြောတာ ဟိုက မသိနဲ့ ခက်ကုန်တာပေါ့ ဂျီတော့ နဲ့ပြောဖို့ ဆိုတာကလည်းဆရာရယ် ဟိုက မဖွင့်တော့ မရ ဒီလိုနဲ့ ခင်မောင်ပါတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကုန်လို့ ပြန်လာရပါလေရော
သူရစိုးက သူ့စကားကို အဆုံး သတ်လိုက်တယ်။
အေး ပြန်လာတော့ ဘယ်လိုဇြစ်သေးလဲကွ ကျွန်တော်မေးတော့ သူရစိုးက ရယ်ပြီး “ပြန်လာတော့ ခင်မောင်အမေက ခုနှစ်သံချီနဲ့ ငိုလိုက်အော်လိုက် လုပ်တော့တာပေါ့ နည်းလားဆရာရယ် ဒေါ်လာ ထောင့်နှစ်ရာ
ကိုပေးလိုက်တာလေ …။အဲ့ ဒီနေ့က ရပ်ကွက်ထဲ ဆူကြတာ ဆရာ့ကိုမြင်စေချင်တယ်။
သူရစိုးက ပြောရင်းရယ်နေပါတယ် ။ကျွန်တော်သာ စိတ်ကူးနဲ့ ခင်မောင့်မျက်နှာကို ပုံဖေါ်ကြည့်မိတယ် ကိုယ့်ဆရာရေ အသည်းကွဲ လို့ ကြေကွဲရတာ တစ်ကြောင်း တကယ်ယုံခဲ့မိလို့ အလိမ်ခံရတာကိုရှက်တာ တစ်ကြောင်း
သူ့ မျက်နှာ မည်းနေမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အမေကြီးက တရှုံ့ ရှုံ့ငိုလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ ခင်မောင်ကို ထရိုက်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော်တွေးရင် သနားမိပါတယ်။
“ ကဲ ဆရာ ….မီဒီယာ ခင်မောင် တို့ဆီသွားရအောင် ”
သူရစိုး ကကျွန်တော်ကို လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခိုင်းလို့ တက်ထိုင်လိုက်တယ် ။ဆိုင်ကယ်မောင်း ထွက်သွားတာက မြို့စွန် ဆီကိုပါ ။
ဟေ့ကောင် သူရစိုး ဘယ်လည်းကွ ဆိုတော့ မီဒီယာ ခင်မောင် ဆီကိုလေ တဲ့ ။ ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်တာ မြို့စွန် က ဇရပ် တစ်ဆောင်ရှေ့မှာပါ ။ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ ကိုယ့်ဆရာရေ
မီဒီယာ ခင်မောင်နဲ့ သူ့တပည့် ကို မင်း တို့ နှစ်ယောက် ဇရပ်ဘေးမှာ ဒန်အိုးလေး တစ်လုံးနဲ့ ထမင်း အိုးလေးတည်လို့ နှစ်ယောက်စလုံး ခပ်မှိုင် မှိုင် ထိုင်နေကြတယ်။ ကိုမင်းက ထင်းစလေးတွေ ကို မီးဖိုထည် ထဲ့လို့
ဇရပ်ပေါ်မှာ လည်း ပုဆိုး နဲ့ ထုပ်ထားတဲ့ အထုပ်နှစ်ထုပ်။ ကိုယ့်ဆရာရေ သူတို့ အ၀တ်တွေ ထင်ပါတယ်။
ဟေ့ကောင် ခင်မောင် ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလည်းကွာ လို့မေးတော့ နှစ်ယောက်စလုံး သံပြိုင် နဲ့ “အိမ်ပေါ်က ဆင်း လိုက်ရတယ်” လို့ဖြေပါတယ် ။ ကိုယ်ဆရာရေ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် သံဝေဂ ရလိုက်မိတယ်
မီဒီယာ ခင်မောင်က “ ဆရာရယ် တခါတလေတော့ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုဆိုတာ ရံှု့းတဲ့ အခါလည်း ရံှု့းတတ်ပါတယ် မီဒီယာ ခင်မောင် တစ်နေ့ မီဒီယာ လောက ထဲ ၀င်အုံးမှာပါ ပတ္တမြား မှန်ရင် နွံ့မနစ်ပါဘူး
ခေသူမှ မဟုတ်တာဆရာရယ်တဲ့ ။
ကိုယ့်ဆရာရေ ငွေတွေ ကုန်လွန်းလို့ သူတို့ အိမ်က အသီးသီး နှင်ချလိုက်ကြတယ် ။ အခုတော့ မြို့ ပြင်က ဇရပ်မှာနှစ်ယောက်သား နေကြတာတွေ့တော့ လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ မီဒီယာ ခင်မောင် အကြောင်းပဲကျွန်တော် တွေးမိပါတော့ တယ်။ နားထဲ သီချင်းသံလိုလို ကြားမိသလားမသိ။
ဖေ့ဘုတ်ကို xxxxအရေးလုပ်လွန်း လို့ အလုပ်ကထွက်လိုက်ရ xxxx–၀က်ဆိုက်များ လိုက်ကြည့်ရင်နဲ့ xxx ၀က်ဆိုက်အတိုင်းဝ xxxxxဒီနေ့ချက်ရွန်းမှာ ဘယ်သူမှ ပေါ်မလာဘူးxxxx
ခင်မောင်တို့ ဆရာတပည့်အကြောင်းကို အကုန်သိရတော့ ၊ အတာကို ရယ်ရမလို ၊ ခံရတာကို သနားမိသလိုလို နဲ့ ဗျာ။
မီဒီယာခင်မောင်နဲ့တွေ့မှ စားရိတ်ရှာပြီး လိုက်သွားလို့ ထောင်ပေးလိုက်ဦးမယ်…။:)
အားပေးသွားပါတယ် ဆရာထက်ရေ။မီဒီယာ ခင်မောင် အဟုတ်ထောင်။
အင်တာနက်ဇာတ်လမ်းလေးတွေဖတ်ရတာ ဗဟုသုတလည်းရပြီး ပိုစ့်ရေးတဲ့သူရဲ့ဟာသမြောက်တဲ့
သူက အင်တာနက်ဆိုင် သုံးဆိုင် ပိုင်တယ်..ကုန်ကြမ်းပေါတယ်
တကယ် သိရင် ဆရာwindtalker တကယ်ခံစားရမယ်
ကျွန်တော်က စာအရေး အသား မကောင်းတာရယ် ရေးဖို့ မသင့်တာတွေရယ်ကြောင့်
ဆရာ ဦးဦး ခင်ဗျား
ပိုက်ဆံရှာ ပြီး ခင်မာင်လိုက်သွားရင် တော့ ထောင်ကျဖို့ပဲရှိလေ့မယ်
အခုလို စီးရီး လိုက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါလို့
ဆရာ ဗိုက်ကလေး ဆရာမ may flowersဆရာ နာဂရ ချစ်သူတို့ကို အထူးလေးစား
ဆရာထက်ရေ ……… စိုးလွင်လွင်သီချင်းလေးကိုပဲ ဆိုလိုက်ချင်တော့တယ် ”ယုံလွယ်သူ ခေါင်းငြိမ့်တတ်လို့ ပြောပြပါဦး ………………………… မင်းကိုယုံလိုက်တာ ကံသီလို့ အမှားကြီးမှားတော့မလို့” လူတွေအားလုံး အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတော့မယ် ……..
ဆရာထက်ရေ … ချက်တင်ရဲ့ တကယ့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ … လိမ်လည်မှုတွေ ၊ ဟန်ဆောင်မှုတွေ အကြောင်းရေးသွားတာ… ဗဟုသုတရပါတယ် … ။ new user အနေနဲ့ကတော့ … ချက်တင်သာ ကမ္ဘာ ၊ ချက်တင်သာ အဓိက ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ကြတယ် .. တစ်ခါမှ .. မမြင်ဖူးတဲ့ လူနဲ့ အွန်လိုင်းလေးတွေထဲက ချိတ်ဆက်လို့ ရတယ်ဆိုတာကိုက .. ကျေနပ်စရာလိုလို ခံစားမိနေတတ်တာကိုး … ။ ကျွန်မအရင်က ကော့မန့် အဟောင်းတွေမှာ မန့် ခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ … အင်တာနက်စသုံးခါစက … ချက်တင်ကနေ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဖူးတယ် … လူအများကြီးနဲ့ ချက်တာမဟုတ်ပါပဲ … အွန်လိုင်းတက်လာချိန် .. သူနဲ့ပဲ အလာပ သလာပ တွေ ပြောဖူးတယ် … သူက ရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူး .. စလုံးကဆိုပဲ …. ။ဒီနိုင်ငံပြန်လာတော့ … အပြင်မှာတွေ့ဖို့ ချိန်းတယ် … ။ သူပြောတဲ့နေရာကြီးက … သူတည်းတဲ့နေရာမို့ … မလာဘူး ပြန်ငြင်းဖြစ်ခဲ့တယ် … ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို နှမသားချင်း မစာမနာ ဒီလိုနေရာမျိုး ချိန်တဲ့ ယောကျာ်းကို စိတ်ထဲ ရွံ ရှာ စက်ဆုပ်လာတယ် … ။ သူ့ဘက်ဘာ အကြံမှ မရှိပဲ ချိန်းတယ်ပြောပြော ၊ အကြံရှိလို့ပဲ ချိန်းချိန်း …. မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ .. ဒီလိုနေရာကိုမသွားသင့်ဘူးလေ … ။ ဖီးလ်နည်းနည်း ငုတ်သွားတယ် … ဘယ်လို ဟာကြီးလဲပေါ့ … ငါ့ကို ဘယ်လိုများသဘောထားသလဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရတာလည်း အမောပေါ့ လေ … ။ ဒါနဲ့ … သူ့ကို ဘလောပစ်လိုက်ပါတယ် … ။
ဒီတော့ ..သူက အရင် ပြောဖူးထားခဲ့တာတွေကို မှတ်ပြီး .. ရုံးကို ဖုန်းခေါ်ပါလေရော … ။ ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန် ကိုယ်မရှိပဲ တခြား လူဖုန်းကိုင်တဲ့အခါ .. မစ္စတာဘရောင်းကို ညနေလာခဲ့ပါ ဘာညာမှာပြီး ဖုန်းချသွားတယ် … ။ ဖုန်းကိုင်လိုက်တဲ့ လူကလည်း … တဖက်က မှာတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ကိုပြန်ပြောတော့ကိုယ့်မှာ ဘာလိုလို ဇယားကတ်နေတယ်လို့ တောင် အထင်ခံရလိုက်သေးတယ် ..ဒါနဲ့ ပဲ … အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဆီကို ဖုန်းပြန်ဆက်ပြီး … နှစ်ပြားမတန်အောင်ရန်တွေ့လိုက်တော့မှ .. ငြိမ်သွားတယ် … ။ ဒါတောင်ပြန်ခါနီး ခဏနှုတ်ဆက်လို့ တွေ့ ချင်ပါတယ် ဘာညာ ထဖြစ်သေးတယ် … ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လျှင် ပါးရိုက်မိလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်လို့ … နောက်ထပ်မဆက်တော့ဘူး … ။ ဒါတောင် … သာမန် ချက်တင်လုပ်တဲ့ အဆင့်မို့နော် …သူများလို့ .. အဟစ်စ် .. အဟက်က်တွေ …ခွိခွိတွေ … ကြူတာတွေ မပါဘူး … ။
အွန်လိုင်းကနေ မိန်းမတွေ အကြူခံရတာကိုက .. ကိုယ်က အခွင့်ရေးပေးလို့ပါ … ။ ဒါကနေတဆင့် ရည်းစားတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာက … မထိခလုပ်ထိခလုတ်ပြောနေတဲ့ အပေါ် သာယာမိပြီး ရှက်ရကောင်းမှန်း မသိလို့ လို့ တော့ ကျွန်မမြင်မိတာပါပဲ … ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ .. တဖက်က ယောကျာ်းလေးက ငါ့ကို ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ .. ဘယ်လိုတွေးထင်သွားမလဲ ဆိုတာမျိုး .. မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် .. လွယ်လွယ်နဲ့ လက်ခံတဲ့ အချစ်ကို ..သူတို့ သစ္စာရှိစွာ စောင့် ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ၊ သာယာတဲ့ အနာဂတ်မျိုးရအောင် နှစ်ယောက်ဘယ်လို တိုင်ပင်မှာလည်း ဆိုတာလည်း … အဲ့ဒီအချိန် မတွေးတတ်ကြဘူး … ။ ကြူနေတုန်းကတော့ … ရေးလို့ကောင်းတာပေါ့လေ .. နောက်မှ .. ဟိုတိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့ အကောင်က ချက်ဟစ်စထရီကို ဖွလိုက်ရမလား ထလုပ်လျှင်တော့ … ဘယ်သူ့ကိုမှ .. ဒေါပွမနေပဲ .. ကိုယ့်ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းတာကိုပဲ .. အပြစ်တင်သင့်ပါတယ် ။
ဆရာထက်ရေ … လူမသိ သူမသိ ကာမရယူ အမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လည်း ဒီလဆန်းက ကြားမိခဲ့တဲ့… ။ ကြားရုံနဲ့ တင် ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာ …. စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိပါတယ် …. ။ ချက်တင်လုပ်နေတဲ့ … မိန်းကလေးတွေ … သတိနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပိုင်းခြားနိုင်ကြဖို့ .. အရေးကြီးပါတယ် … ။
ခုလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေး ပြတဲ့ ဆရာမ Etone ကို လေးစားပါတယ်
ကျွန်တော် လည်း ဒီ အင်တာနက် ဇာတ်လမ်းကို ဟာသကနေ နောက် တရားရုံးပေါ်
မေ၇ာက်ခဲ့သော လိမ်လည် မှုများဆိုပြီး ပြစ်မှု ၊ မငခင်း ၀တ္ထုရေး ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ် ။
ဆရာမ ကျန်းမာ၍ စိတ်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
အခုလို အားပေးတာကို ကျေးဇူးပါ
လောကမှာ တကယ် ဖြူစင် ၇ိုးသားတဲ့ လူတွေ ရှိနေပါတယ် သို့သော် မရိုးသားတဲ့ လူတွေ
တရားဓမ္မနဲ့ လွတ်နေသူတွေကတော့ များပါ တယ်လေ။
အပျော် အပါး ဟာ တဖက်သားကို မနစ်နာအောင် ပြု တတ်မှပါ။
ဆရာမ ခိုင်ခိုင် ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပါစေ